5 codsi oo muhiim ah si loogu ordo orod | Androidsis
Waxaan durba joognaa bartamihii bishii Abriil iyo wax ka yar diiq diiqii ayaanu joogi doonnaa xeebta oo u eg. Marka khadkeenu waa sida ugu macquulsan mana aha inaan ku dhuumanno dalladda ama tuwaalka gadaashiisa, Android waxaan ku haysannaa dhowr codsi oo naga caawin kara si labadan bilood iyo badh ee hadhay, aan ula jaan qaadno a dibedda loo baxo maalin walba si loo yareeyo culeyska dheeriga ah ee aan qaadanno xilliga qaboobaha.
Ka mid ah 5 codsi kuwaas oo aan ka faalloon doono xagga hoose, waa kuwa ugu caansan, in ka badan midba midka kale oo lagu daray muddooyinkii u dambeeyay, sidaa darteed xitaa isku mid Google waxay baytariyada u dhigtay inay keenaan adeegyo wanaagsan waxa ku jira app wanaagsan o APIs si loo hagaajiyo saxnaanta GPS iyo la socodka dhaqdhaqaaqa jirka.
Waxaan ka bilaabayaa kuwa aan caan u ahayn sida dadka kale ee raaci doona iyo taas ayaa noqotay mid ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee ka dhacay Play Store. iMapMyRUN, ama ku orod Khariidad My Run, waa barnaamij loogu talagalay kuwa maalin walba hawl culus u qaata.
Codsi aad u fiican in la helo garaafka isbeddelka tartamada maalinlaha ah, jidadka la maro ama xitaa sida ugu dhakhsaha badan ee aan awoodnay inaan u orono. Qaar ka mid ah astaamaheeda si loo muujiyo waxaan ka xusi karnaa xog ururin aad u qaali ah mana cuni doono batteriga sida haddii ay fulin karto codsi kale oo tartanka ah. Bilaash ayaa looga heli karaa Play Store markaa hada cudur daar malahan inaad isku daydo oo aadan orod ku aadin.
La orod MapMyRun
Developer: Khariidadda MapMyFitness, Inc.
In kasta oo aysan si sax ah u ahayn codsi socoshada, taageerada ay u fidiso aaladaha Android Wear awgood, ma aanan u oggolaan karin inay ku dhaafto gelitaankan 5-ta barnaamij ee ugu wanaagsan ee socda. Marka laga reebo waxa la tirinayo tilaabooyinka iyo mitirrada, waxay leedahay garaafyo wanaagsan waxayna tirineysaa dhammaan jimicsiga maalinlaha ah ee aad sameyso. Waxay ku shaqeysaa asalka xilligan la rakibay iyo Waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan si ay ula socoto kuwa kale ee takhasuska leh sida kan aan kor kusoo xusnay.
Sharad xiiso leh Google Sababtoo ah hagaajinta saxda ah ee API-yada waxqabadka, Google Fit ayaa iskeed isu taagtay inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qaybtaan.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo muddo dheer nala joogay, oo sidaas darteed waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran. Waxay u shaqeysaa sida soo jiidashada, waxay bixisaa taageero loogu talagalay Android Wear oo dhowaan heshay casriyeyn muuqaal ah oo had iyo jeer la qiimeeyo.
Marka laga reebo waxa socda sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad gasho noocyo kale oo nashaadaad ah haddii aad sidoo kale jeceshahay inaad baaskiil wadato si loo tijaabiyo asalkaaga jireed. Mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ayaa ah in isticmaaleyaasha kale ay nagu dhiirrigelin karaan farriimaha codka in la maqlo inta aan heysano muusikada aan ugu jecelahay dhegaha. Barnaamij tayo sare leh.
Endomondo - Orod & Baaskiil
Waxay raacdaa xariiqa Endomondo waana mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee ka jira Bakhaarka Play Store. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad la socoto jimicsiyadaada oo dhan iyo orodka maalinlaha ah, iyo waxay taageertaa labadaba Android Wear iyo Pebble. Mid kale oo muhiim u ah ciyaartooyda u baahan kiiloomitirkooda maalinlaha ah inay dareemaan raaxo leh jirkoodana ku haayo qaabka ugu sarreeya.
Ku buuxi xulashooyinka waxaana laga heli karaa bilaash dukaanka barnaamijka Google.
RunKeeper - Socodka Socodka GPS
Oo ma jiro laba aan saddex lahayn. Runtastic waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu caansan uguna dhameystiran ee soo raaca wixii ka dambeeyay labadii hore. Aynu nidhaahno waxay noqon doontaa arrin dhadhamin ah oo u baahan in la doorto mid ama tan kale, laakiin Runtastic waxaan ku haysannaa fursado badan oo badan oo aan gacanta ku hayno. Bixinta taageero loogu talagalay dharka la gashado sida SmartWatch 2, Samsung Gear, Android Wear iyo Pebble.
Waxaa xusid mudan inay ku dhexjirto Google Fit sidaa darteed waxay noqon kartaa xulashada saxda ah in laga qaado waddooyinka laga bilaabo maanta oo la muujiyo in jirkeenna iyo jirkeennuba ay leeyihiin adkeysi.
adidas oo ku socota Runtastic
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 5-ta codsi ee ugufiican ee lagu aado orod
Huawei waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa Huawei P8